Tag: piritsi shanduro | Martech Zone
Tag: piritsi shanduro
Martech Yakagadziridzwa yeMafoni uye Mahwendefa Bhurawuza
Svondo, Gunyana 16, 2012 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Kana iwe wakamboedza kuverenga iyo blog munguva yakapfuura pane mbozhanhare kana piritsi bhurawuza, iwe ungangodaro waive wakanaka kunetseka. Iwe uchave unofara kuziva kuti isu takazogadziridza iyo vhezheni uye tikavandudza chiitiko tichishandisa WPTouch Pro (yakabatana chinongedzo). WPTouch Pro ingangoita mhinduro yakasimba yeWordPress uko iwe kwaunogona kuve izere kutonga pamusoro pesoftware uye piritsi vhezheni. Heano marongero edu akatwasuka pane iPhone: Heano maitiro edu akatwasuka pane
Chitatu, June 4, 2008 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Ndinoona nyaya nemamiriro ekunze uye ndinotenda kuti nendege dzinoshuvira kuchengetedza vanhu kuchengetedzeka. Mwanasikana wangu ane makore gumi nemana ari parwendo rwake rwekutanga nekirasi yake kuenda kuWashington DC Iye anga achitumira mifananidzo kwandiri yeWhite House, Washington Monument, Bumbiro nedzimwe nzvimbo kubvira paakasvika neSvondo manheru. Takabhadhara mari yakati wandei parwendo uye chikoro chake chakaita rwendo urwu zvakapfuura